Ny Mibolerone steroidido mahery indrindra (Mora mitsahatra) ao anaty aterineto | AASraw
Ny Mibolerone steroidido mahery indrindra (fitateram-bahoaka)
/Blog/Gallery/Ny Mibolerone steroidido mahery indrindra (fitateram-bahoaka)
Posted on 07 / 19 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery. Manana izany 0 Comment.
Ny zava-drehetra momba ny Mibolerone (Manara-penina)
1. Inona no atao hoe mibolerona?
2.Mibolerone Pharmaceutical Compound
3.Mibolerone fampiasan'ny bodybuilding
5. Mibolerone ny antsasaky ny fiainana
7. Mibolerone dosage
10.Buy Mibolerone an-tserasera
Mibolerone video vovoka
I.Mibolerone vovoka ireo karazana fototra:
Name: Mibolerone poids
Color: Vola fotsy na mavo
Mibolerone(jereo ny gripa, Cas No.3704-9-4) fantatra amin'ny anarana hoe dimethylnortestosterone (DMNT), no nampidirina voalohany tao amin'ny 1963. Ny Mibolerone dia nivarotra ny Upjohn miaraka amin'ny marika Check Drops sy Matenon, noho ny fampiasana azy ho vétérinaire drug.It dia voatondro manokana ho toy ny fitsaboana am-bava mba hisorohana ny estrus (hafanana) amin'ny alika vavy alika (alika mibolerone).
Mibolerone dia toeram-pitsaboana anabolic steroid izay navotsotra tao amin'ny 1960's avy amin'i Upjohn teo ambanin'ny marika Check Drops ary taty aoriana dia nijery ny alika mokolokone (alika mibolerone). Ny tanjon'ity steroid ity dia ny manakorontana ny fihodinan'ny alika vavy (alika mibolerone) mba hisorohana ny fitondrana vohoka. Toy ny amin'ny hormones maro amin'ny anabolic steroid, ary anisan'izany ny sokajin'ny veterinarian, fotoana fohy taorian'ny fanombohana azy dia hitan'ny atleta sy ny bakteria fampiasana (bakteria mibolerona).
anarana Mibolerone, DMNT
Brand name Jereo ny Drops, Matenon, Jereo ny sakafo alikaola
Storage Temp vata fampangatsiahana
Color Vola fotsy na mavo
Momba ny fampiasana bodybuilding mibolerone, ny mibolerone (Fiatrehana ny dipoavatra) dia iray amin'ireo steroids mahery indrindra hatramin'izay. Izy io koa dia iray amin'ireo kanseran'ny kanseran'ny aretina indrindra. Tsy steroid izy io matetika ampiasain'ireo mpandidy zavakanto na atleta vaovao. Ho hitanao fa voafetra ihany ny fampiasana azy amin'ny fifaninanana alohan'ny ady na ny fifaninanana. Ny mpanao bakteria sasany dia hampiasa azy io alohan'ny fifaninanana mba hanampiana amin'ny herinandro faran'ny herinandro na mandritra ny vanim-potoana ho an'ny fanosehana fanampiny, saingy tsy steroida be dia be izany. Hiantehitra bebe kokoa momba ity mibolerona mahery fihetsika steroid ity isika (Mitohy ny fika).
2. Mibolerone Pharmacie
Aiza ny mibolerona? Ahoana ny fomba hanaovana ny Mibolerone (Fipoahana)?
Araka ny voalaza tetsy aloha, ny Mibolerone dia anabolika vet-grade izay noforonina voalohany tao amin'ny 1960s avy amin'ny orinasa antsoina hoe Upjohn. Nandritra io vanim-potoana io dia nanana anarana tany am-boalohany izy io Hamarino ny rano, fa taorian'izay dia niova ho zavatra hafa izy io: Mijery ny sakafo alika amin'ny alikaola (alika mibolerone). Ny antony tany am-piandohana ity fomba fitsaboana ity dia ny fisorohana ny alika vavy tsy ho bevohoka. Niasa manokana izy mba hampiato ny dian-tongotry ny alika vavy, ary dia nijanona ara-bakiteny izy io, vokatra iray natao tamin'ny fikasana hanampiana ireo kambana. Na izany aza, toy ny zava-mahadomelina maromaro miaraka amin'ny tanjona iray, ny olombelona, ​​indrindra fa ireo izay ao amin'ny atletisma sy ny atidoha, dia nahita fa tena ilaina amin'ny antony hafa.
Momba ny fomba fanaovana mibolerone (Check Drops), ny mibolerone dia mifandraika amin'ny hafa malaza amin'ny fampiasana steroids Nandrolone. Ny mibolerone dia androgen anabolic anabolic, ary avy amin'ny steroid hafa, Nandrolone. Tena miova izany Nandrolone. Ny fitiliana fotsifotsy dia noforonina tamin'ny fampidirana tsotra fotsiny ny methyl group amin'ny 7th sy 17th ny hormone an'ny Nandrolone. Ity vondrona fanampiny ity ao amin'ny toerana 7th dia mahatonga azy bebe kokoa amin'ny fiantraikany amin'ny androgenic effects, ary manakana ny enzyme 5-alpha tsy mahomby amin'ny asa. Ny vondrona fanampiny mankany amin'ny toerana 17th koa dia miaro ny hormonina tsy ho simba mandritra ny fanindroany. Noho izany teknika, heverina ho C17-alpha alkylated anabolic steroid.
Miaraka amin'ny sombiny kely, dia miova ny itty-bitty, mahatonga ny hormone ho an'ny Nandrolone mahery sy mahery vaika. Io angamba no iray amin'ireo mpamono mahery vaika matanjaka indrindra eran-tany, indrindra fa ny Upjohn dia milaza fa ny Check Drops dia avo enina heny mahery noho ny testosterone ary saika in-telo heny mahery tahaka ny androgenika. Raha ny tokony ho izy, dia toa mahery kokoa ny momba izany.
3. Mampiasa bodybuilding Mibolerone
Ny Mibolerone dia ampiasain'ny mpanao biriky, ny mpamono olona, ​​ny atleta matanjaka sy ny mpiady, ny rehetra mba hampitombo ny herisetra sy ny fampisehoana amin'ny andro fifaninanana. Ny Mibolerone (Manara-penitra) dia mahomby rehefa ampiasaina 30 minitra alohan'ny fifaninanana. Ny mpampiasa dia hiaina herisetra mihamitombo, mifantoka amin'ny fifaninanana ary fifaninanana. Na dia tsy misy fitsaboana mivantana aza ity steroid ity dia mampiseho fihetsika iray hita eo amin'ny CNS (System Central Nervous) amin'ny alalan'ny karazana androgen overload. Izany no hany antony nampiasan'ny atleta ity fanafody ity, satria tsy misy dikany amin'ny zava-mahadomelina izany.
Ny Mibolerone dia tambatra anabolika anabolika, avy amin'ny nandrolone. Ity agent ity dia ny 7,17-dimethylated nandrolone, izay tena mahery kokoa amin'ny maha-anabolika sy androgenika azy noho ny ray aman-dreniny tsy methylated. Nandritra ny taona maro, ny mibolerone dia nahazo laza teo amin'ny bodybuilders ho iray amin'ireo mahery fo indrindra hatramin'izay. Marina izany amin'ny heviny ara-teknika, satria iray amin'ireo vokatra steroid vitsivitsy ihany no mahomby amin'ny mikrograma, fa tsy milina, vola. Nandritra ny fanandramana biby fiompy, dia tapa-kevitra ny mibolerone ny hanana 41 in-droa ny asa anabolic ny methyltestosterone rehefa nomena am-bava. Mifanohitra amin'izany kosa, ny fe-potoana 18 dia tsy inona fa ny androgenic activity. Na dia voamarika amin'ny fomba ofisialy io toetra io aza ny roa tonta, dia mitazona karazana anabolika (amin'ny lafiny iray) izy io. Tena misy ihany koa ny endriky ny egônogika sy ny fanavaozana, miaraka amin'ity zava-mahadomelina ity. Amin'ny atleta dia matetika ampiharina mandritra ny dingan'ny fampiofanana, na hamporisihana ny herisetra alohan'ny fampiofanana na ny fifaninanana.
Ny mibolerone dia tsy steroid izay matetika ampiasain'ny mpandàla biriky na atleta vaovao.
4. Mibolerone (Fiompiana)
Tsy isalasalana, ny antony voalohany mahatonga ny Mibolerone (Check Drops) dia zava-mahadomelina malaza dia noho ny vokatra mahery avy amin'ny androgenic, amin'ny teny hafa, ny fahafahany manatsara sy manamafy ny herisetra. Izany no mahatonga azy ireo ho safidy malaza ho mpiloka, atleta ary atleta matanjaka, koa. Ho an'ireo izay ampiasaina amin'ny avo lenta amin'ny fifaninanana, dia mazava loatra ny zavatra azony atao amin'ny lafiny ny vokany; Izany dia mahatonga azy ho tena ilaina sy mahasoa. Mifanohitra amin'ny finoan'ny ankamaroan'ny olona, ​​dia tsy mampitombo ny herisetra ny ankamaroan'ny steroid. Azo antoka fa afaka mampitombo ny fifantohana izy ireo ary hampitombo ny halavan'ny testosterone izay mitarika ho amin'ny fifantohana bebe kokoa sy ny antony manosika, fa raha mbola mirehitra, tezitra ny herisetra, vitsy ny zava-mahadomelina dia misy fiantraikany amin'ny an'ny Miberlorone. Ny fanaovan-dratsy dia tsy zavatra ratsy mihitsy. Raha olon-dehibe sy tompon'andraikitra ianao, dia afaka mampiasa fampiasana mahery vaika rehefa ampiasaina araka ny tokony ho izy. Na izany aza, raha misy olona manana toe-tsaina ratsy, dia fanapahan-kevitra tsy mety ny manome azy ireo na mamela azy ireo hampiasa ny Mibolerone (Check Drops).
Ny antony voalohany tokony hampiasana ity karazana zava-mahadomelina ity indray dia ny hampivelatra ny fifantohana amin'ny ati-doha sy ny herisetra miteraka ady na ny fikajiana fohy hafa, ny karazana fifaninanana mila fanatsarana. Atleta mahazatra tokoa ny mitondra ny zava-mahadomelina mitarika ady amin'ny hetsika mahery vaika ao amin'ny gym, saingy hampiasa azy io amin'ny faran'ny fifaninanana sakafo amin'ny fifaninanana mba hahatongavana amin'ireo herinandro farany ireo amin'ny fomba fijery mibaribary. In bodybuilding, dia sarotra be ny fanomanana, ary ao anatin'ireo herinandro farany ireo izay mihamitombo hatrany ny fotoana, ilaina hatrany ny fanosehana saina iray farany, ary ny Mibolerone (Check Drops) dia afaka manao izany ho azy ireo. Tsara homarihina fa ny fampiasana azy maharitra dia mety hitarika amin'ny fialana sasatra, na izany aza, ny fisorohana ny rano dia mety. Izany hoe, zavatra izay azo fehezina ary tsy dia lehibe loatra amin'ny fifanarahana amin'ny lafiny hafa izay manomana fanamby ho sarotra.
Amin'ny teoria, ny Mibolerone (Check Drops) dia zava-mahadomelina izay mety hanana toetra anabolic potenza, fa noho ny fahasimbana ho an'ny fahasalamanao, dia tsy mahatsapa mihitsy ny fampiasana ity zava-mahadomelina voalohany ity ho an'izany. Izany dia milaza fa misy olona tsara kokoa noho ny fanararaotana izany ho an'ny tolona ho fanoherana, ary indray, io ihany no hany antony handraisana azy io satria mety hampidi-doza izany amin'ny fomba maro hafa.
Ny Mibolerone (Check Drops) dia manana ny antsasaky ny ora 4 (mibolerone ny antsasaky ny fiainana), izay fohy (ny fotoana aorian'izay ny zava-mahadomelina sy ny vokany dia mamela ny vatan'ny mpampiasa). Izany no mahatonga ireo atleta voatery hampiasa azy io minitra 20 ka hatramin'ny 30 minitra mialoha ny fotoana hikatsahany ny fitomboany.
6. Mibolerone cycle
Tsy misy porofo marina anecdotal na raha tsy izany dia atahoran'ny atleta ny fitsapana amin'ny "cycle" (cyber mibolerone) tahaka ny fanao amin'ny steroids hafa. Toa ity steroid ity dia nanao fanambarana mafonja ho toy ny fialan-tsasatra mialoha ny hetsika ho fampitomboana ny herisetra sy ny fifaninanana amin'ny fifaninanana. Na izany aza, dia tsy misy fandrosoana goavana eo amin'ny vatana amin'ny aretin-kozatra azo atao noho io zava-mahadomelina io satria azo ampiasaina amin'ny fitsinjarana herinandro fohy 2, amin'ny dosie kely mibolerone. Mbola misy fotoana bebe kokoa amin'izany, na marary bebe kokoa, ary olana ara-pahasalamana.
Ny mibolerone dia matetika ampiasaina amin'ny 30 minitra alohan'ny fifaninanana, satria ny zava-mahadomelina dia manana fombafomba fohy mibolerona. Ny fomba fitsaboana an'io fanafody io dia ny fanangonam-bozaka, izay mametraka takelaka Mibolerone eo ambanin'ny lela. Izany fomba fampiasana izany dia ahafahana mahazo ny herisetra eo amin'ny herisetra sy ny tanjaka. Ny hetsika amin'ity zava-mahadomelina ity dia mifarana amin'ny ora 4, avy eo dia nesorina tao amin'ny vatan'ny olombelona ny vatana.
Ny dosage mahazatra mibolerone dia momba ny 5 mgs an'ny Mibolerone izay tokony hakana 30 minitra alohan'ny fotoana iray manan-danja fampiofanana na fifaninanana. Amin'ny ankapobeny, ity medikaly ity dia nalaina irery, tsy misy tsiranoka mibolerone, ary tsy misy fitsaboana hafa.
Amin'ny ankapobeny, tsy toy ny maro hafa anabolic drugs, Mibolerone (Toetr'andro fikarohana) dia tsy ampiasaina mandritra ny fe-potoana. Izany no fanafody avo lenta ho an'ny hetsika izay mampitombo ny herisetra sy ny fifaninanana fifaninanana. Ny fomba fohy amin'ny fitantanana sy ny dosage mibolerona ambany dia mampiasa Mibolerone noho ny hozatra mahazo ny tsy fahampian-tsakafo. Etsy ankilany, ny fampiasana azy io kokoa na amin'ny dibebola avo lenta kokoa dia afaka miteraka olana ara-pahasalamana. Raha mbola fohy ny antsasaky ny fiainan'i Mibolerone dia tokony halaina 30 minitra alohan'ny fifaninanana ny zava-mahadomelina.
Raha tena mila mandray an'io fanafody io ianao, dia afaka mividy mibolerone amin'ny aterineto ao amin'ny vohikalantsika www.aasraw.com, fa aza adino ny mandray ireo hepatoprotectors mba hampihena ny fihenan-tsakafon'ny Mibolerone.
8. Ny vokatry ny mibolerona
Ny vokatry ny mibolerona dia maro. Io no iray amin'ireo steroide steroïde mahery indrindra sy steroids tena mampidi-doza indrindra hatramin'izay. Satria ny fiantraikany amin'ny mibolerone dia matanjaka toy izany dia tsy steroid ny olona tokony hampiasa tena. Misy safidy maromaro kokoa. Ny fitomboan'ny herisetra lazaina alohan'ny ady dia mety haka fanahy, saingy mety hiteraka valisoa miaraka amin'ity steroid ity ny loza. Tsy midika izany fa ho faty ny olona, ​​ary azo atao ny miala amin'ny sehatry ny mibolerone (tsy azo sakanana tanteraka). Mety hisy ny fiantraikany eo amin'ny lafiny mibolerone:
Ny fiantraikan'ny Mibolerone-Estrogenic:
Ny mibolerona dia voan'ny aretin-koditra, ary heverina ho steroid mahery indrindra noho ny fiovam-pon'ny 7,17-dimethylestradiol (estrogen miaraka amin'ny asa biolojika avo). Ny dokotera Gynecomastia dia mety ho zava-manahirana mandritra ny fitsaboana, indrindra rehefa ambony kokoa noho ny dosage ara-pahasalamana ara-pahasalamana. Amin'izay fotoana izay ihany dia mety ho lasa olana ny fitazonana ny rano, ka miteraka fihenan'ny famaritana ny hozika satria mitazona ny fihazonana ny rano sy ny tahan'ny tavy. Mba hisorohana ny fatiantoka mahery vaika dia mety ilaina ny mampiasa anti-estrogen toy ny Nolvadex®. Ny iray dia mety mampiasa tsiranoka aromatase toy ny Arimidex® (anastrozole), izay fanafody mahomby kokoa ho an'ny fifehezana estrogen. Mety ho lafo be anefa ny fitsaboana aromatase, raha ampitahaina amin'ny fitsaboana amin'ny fikolokoloana amin'ny estrogen, ary mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny lipidia.
Tsara homarihina fa ny mibolerone koa dia maneho hetsika matanjaka toy ny progestin ao amin'ny vatana. Ny voka-dratsiny mifandray amin'ny progesterone dia mitovitovy amin'ireo estrogen, anisan'izany ny fanelingelenana fanavakavahana ny famokarana testosterone sy ny fihenan'ny tahiry be loatra. Ny progestins koa dia mampitombo ny fiantraikan'ny estrogens amin'ny fitomboan'ny tavy. Toa misy fiovàna mahery vaika eo amin'ireo hormones roa ireo, ka mety hitranga amin'ny gnecomastia ny fampiasana ny progestinina raha tsy misy ny estrogen tafahoatra. Ny fampiasana anti-estrogen, izay manakana ny vatana estrogenic amin'io aretina io, dia ampy ho an'ny fihenan'ny gnecomastia vokatry ny mibolerone.
Mibolerone hafa mahomby-Androgenic:
Ny androgenic effects of mibolerone dia mety ho ny akne, ny fitomboan'ny volo volo ary ny fahaverezan'ny volo amin'ny lehilahy voatondro ho lahy ny baldness. Ny androgenic effects of mibolerone may also include symptoms of virilization in women; Raha ny tena izy, dia azo antoka ny virilization amin'ny ambaratonga sasany.
Ho an'ny mpampiasa ny génétique dia mamaritra ny fahasarotan'ny androgenic effects. Zava-dehibe ihany koa ny manamarika fa ny androgenicity ny hormonina dia tsy azo sakanana amin'ny fampiasana 5-alpha reductase inhibitor toy ny Finasteride; Tsy hampiasa izy ireo.
Ny fiantraikan'ny Mibolearone-kardia-vovoka:
Ny iray amin'ireo fomba ratsy indrindra hamongorana ny rafi-kery sy areti-maso dia amin'ny alalan'ny fakana an'i Mibolearone. Rehefa mitondra azy ireo ianao, dia hanao ny koloroolinao izy ireo, indrindra fa ny kolesterolanao, mandalo ny tafo. Hahafaha-javatra bebe kokoa ihany koa ny olana momba ny kansera. Ataovy ao an-tsaina ireo rehetra ireo rehefa mampiasa Mibolearone. Tokony hihinana sakafo izay manohana tsara ny fahasalaman'ny foza, izay midika fa betsaka karazana asidra fetsy, siramamy vitsy dia vitsy ary vitsy sasao be loatra. Ankoatra ny fahazarana mahazatra, dia zava-dehibe ihany koa ny fanatanjahan-tena izay manasongadina ny cardio. Raha olon-kafa izay mifanaraka amin'ilay famaritana voatonona fotsiny ianao dia tokony ho tsara amin'ny Mibolearone.
Na izany aza, raha toa ianao ka olona manana sarintany tena mahatsikaiky, dia zava-mahadomelina iray hafa izay tsy tokony hohadinoinao fotsiny. Raha ny zava-misy dia azonao atao ihany koa ny mitondra vatsy anti-oxidant mba hanamarina tsotra fotsiny fa ny fonosanao rehetra dia rakotra amin'ny fampiasana.
Ny fiantraikan'ny Mibolerone-Hepatotoxicity:
Ny mibolerone dia c17-alpha alkylated compound. Io fiovana io dia miaro ny zava-mahadomelina amin'ny fanafoanana ny aty amin'ny aty, ka mamela ny ampahany betsaka amin'ny fidirana amin'ny zava-mahadomelina ao amin'ny rà mandriaka manaraka ny fitantanana ny orana. C17-alpha alkylated steroids anabolic / androgenic may be hepatotoxic. Mety ho simba ny atin'ny aretina ny aretina maharitra na avo lenta. Amin'ny toe-javatra tsy fahita firy no mety hampivelatra ny fiainan'ny olona. Tsara ny mitsidika dokotera mandritra ny diany isan-taona mba hanaraha-maso ny asan'ny fo sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny. Ny fitsaboana amin'ny steroids c17-alpha alkylated dia matetika voafetra amin'ny herinandro 6-8, amin'ny ezaka mba tsy hisakanana ny fihenan'ny aty. Tsy dia fahita firy ny fahasarotan'ny aty noho ny antony isan-taona izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona ny steroide anabolic / androgenic, na dia tsy azo ekena aza io steroid io, indrindra amin'ny dose avo sy / na maharitra. Mariho fa ny fampahalalam-baovao Amerikana momba ny mibolerone dia manonona afa-tsy ny fianarana olombelona iray natao tamin'ny mibolerone, ary dia najanona aloha ny fianarana noho ny hepatotoxicity ambony.
Ny fampiasana fanafody fanindronana amin'ny fery fanampiny toy ny Liver Stabil, Liv-52, na Essentiale Forte dia voatery haka ny hepatotoxic anabolic / androgenic steroids.
Ny voan'ny Mibolerone-Testosterone Inhibition:
Ny Mibolerone dia manafoana tanteraka ny famokarana testosterone voajanahary.
Ny fiantraikan'ny mibolerona hafa -Ny hafa:
-Tory matory na tsy matory
-Tondom-barotra amin'ny fihetsiketsehana tsinay
- Manopy mavo ny fotsy ny maso
- Ny tsindry mafy
- Fametrahana ny tsingerim-bolana eo amin'ny vehivavy
- Fanaovana tsiambaratelo sy fanitarana ny vatan'ny vehivavy
-Deepening the voice in women
- Mampitombo ny mety hisian'ny fifindran'ny myocardial
- Misy fiantraikany ratsy amin'ny triglyceride
- Mampihena be ny fialan-tsasatry ny fitsaboana
9. Mibolerone fanamarinana
Jereo ny gidro, ny anaran'ny mibolerone, CAS No.3704-9-4, dia novokarina tany am-piandohana ho fanampiana ny alika vavy hialana amin'ny hafanana. Ny technique dia heverina ho toy ny androgen, na izany aza, ny mibolerone koa dia tena lozisialy izay ny fiantraikany amin'ny vokatr'izy io amin'ny alika vavy. Ny mibolerone dia manana indroa ny fiaraha-miasan'ny progesterone mpandray ny progesterone. Ity zava-mahadomelina ity dia nalaza ho tena mahery vaika amin'ny steroid mba hahazoana ny lanjany sy hivoatra amin'ny firongatry ny herisetra. Ity zava-mahadomelina ity dia ny hoe -NNNXX-derivative ny bolasterone ary raha nandrolone dia matanjaka kokoa sy kokoa noho ny testosterone, toy izany koa ny mibolerone raha oharina amin'ny bolasterone. Ny fampidirana ny vondrona mile ao amin'ny C-19 dia tsy mampitombo ny asan'ny AR sy ny PR, fa mampitombo ihany koa ny toetry ny molekiola. Ny mibolerona dia endriky ny nortestosterone (nandrolone); Na izany aza, dia tsy metabolised amin'ny metabolita dihydronandrolone tsy mahomby izy noho ny fiarovana voajanaharin'ny vondrona 7-alpha methyl.
Ny Mibolerone dia heverina ho steroide mahery indrindra izay mamokatra vokatra tadiavina amin'ny fotoana fohy. Na izany aza, raha tsy izany dia ny fitsaboana ny steroid amin'ny fitondran-tena mety, amin'ny fotoana voafetra, ary amin'ny fomba mety.
Izany dia satria ny dosimetera mibolerone dia novolavolaina taorian'ny traikefa azo antoka sy fikarohana ara-tsiansa marobe. Amin'ny ankapobeny, ny vokatra dia marina sy mahomby, fa tokony ampiasaina amin'ny fepetra tsara.
10. Buy Mibolerone online
AASraw dia orinasa malaza izay manome karazam-panafody steroïde antserasera, manome mibolerone mivarotra an-tserasera, satria i Stopjohn dia nanakana ny famokarana dipoavatra maro taona maro lasa izay, ka maro ny tavoahangy (raha misy) dia misy ny vokatra voalohany nataon'i Upjohn. Na dia sarotra aza ny fikarakarana legioma maromaro, dia misy dibebola marobe mibolerone misy vokatra azo alaina avy amin'ny tsena ambanin'ny tany. Ny vidiny dia mety miova, fa amin'ny farany, mg per mg io dia steroid lafo be toy ny hafa toy ny Deca Durabolin sy Dianabol. Maro ny laboratoara ambanin'ny tany mividy mibolerona mena mba hivarotana an-tserasera mba hahazoana vokatra vita.
Tags: mividy miora mibolerone, Mibolerone poids
Tykerb (231277-92-2) -Nanararaotra ny mpitaingin-tsoroka MAGL inhibitor mpamatsy JJKK-048 online
Maury Cheskes on Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
Carrie on Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
Laura on Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
AJ on Ny top 10 Top Best Selling Weight Loss Supplement
AJ on Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Ny vinaingitra marefo mahomby: Sibutramine vovoka (Meridia)